नेपाल आज | पाकिस्तानले भारतमाथि लगायो क्लस्टर बम आक्रमणको आरोप, केहो क्लस्टर बम?
पाकिस्तानले भारतमाथि लगायो क्लस्टर बम आक्रमणको आरोप, केहो क्लस्टर बम?
आइतबार, १९ साउन २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
भारत र पाकिस्तानको सीमामा गोलीबारी भएको छ। जसमा दुई व्यक्ति मारिएका छन् भने ११ व्यक्ति घाइते भएका छन्।
पाकिस्तानले भारतमाथि नियन्त्रण रेखामा गोलीबारी गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुर र विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीले ट्विट गर्दै भारतले पाकिस्तानको नियन्त्रण रेखामा रहेको क्षेत्रमा भारतले गोलीबारी गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनीहरूले लेखेका छन्, 'नियन्त्रण रेखामा आम नागरिकलाई निशाना बनाएर भारतीय सेनाले क्लस्टर बमको प्रयोग गरेकोमा म निन्दा गर्दछु यो जेनेभा सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो।'
त्यसपछि कुरैशीले गरेको ट्विटमा भारतले क्षेत्रीय शान्ति भंग गरेको आरोप लगाइएको छ। उनले युद्ध फैल्याउन उत्सुक भारतले क्षेत्रीय शान्तिलाई अस्थिर बनाउनुका साथै नियन्त्रण रेखामा मानवअधिकारको पनि उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ।
केहो क्लस्टर बम
जेनेवा सम्झौताअनुसार क्लस्टर बम उत्पादन र प्रयोग प्रतिबन्ध छ। तर केही देश वा सेनामाथि युद्ध वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा यसको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यो अत्यान्तै खतरनाक हुन्छ किनकि मुख्य बमबाट निस्किने साना विस्फोटकले निर्धारित लक्ष्य आपसपासका क्षेत्रमा पनि नोक्सानी पुर्‍याउँछ। संघर्षका क्रमा यसको प्रयोगले आम नागरिकलाई पनि नोक्सान पुर्‍याउने सम्भावना बढी हुन्छ। यतिमात्रै होइद्द मुख्य बम पड्किएपछि पनि त्यहाँ वरपर छरिएका साना विस्फोटक लामो समयसम्म त्यतिकै रहन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा युद्ध समाप्त भएपछि पनि ती विस्फोटक पड्किएर जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
यो बम विरोधी सेनालाई मार्न र उनीहरूको सावारी सधानलाई क्षति पुर्‍याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई लडाकू विमानबाट र जमिनबाट लन्च गरिन्छ।
आतङ्ककारी आक्रमणमा ७१ सैनिकको मृत्यु
तातोपानी भन्सार प्रमुख बस्नेतमाथि १० करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा
हिमपातले टिपर चिप्लिएर दुईको मृत्यु
हिमपातले परीक्षामा लेख्न नसकेर रोए विद्यार्थी